असर्फीको मूल्य बढ्यो – Sulsule
सुलसुले २०७९ असार ९ गते १६:३० मा प्रकाशित
संशोधन कार्यविधिअनुसार यसअघि प्रतिग्राम रु. दुई सयका दरले रकम थप गरी असर्फीको दैनिक मूल्य निर्धारण हुँदै आएकामा रु. एक सयले बढाएर प्रतिग्राम असर्फीको मूल्य रु. तीन सय बनाइएको छ ।
राससका अनुसार यसरी बिक्री गर्दा जर्ती लगायतको लागतबापतप्रति ग्राम रु. पाँच सय थप गरी बिक्री मूल्य निर्धारण गरिने भएको छ । हाल रु. तीन सय थप गरिँदै आएको थियो । यही असार ५ गते बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।